Carragher oo ka warbixiyay sababaha ay u adag tahay in Klopp uu u dhaqaaqo kooxda Bayern Munich – Gool FM
(Yurub) 19 Maarso 2018. Halyeeyga kooxda Lverpool ee Jamie Carragher ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sababta uu u aaminsan yahay inay adag tahay in Jürgen Klopp uu ka dhaqaaqo shaqada tababarka ee Reds, si uu u noqdo macalinka cusub ee Bayern Munich.
Madaxweyne sharafeedka kooxda Bayern Munich Franz Beckenbauer ayaa shaaca ka qaaday sida uu u doonayo in Jürgen Klopp uu la wareego shaqada tababarka ee Bavarian-ka.
Franz Beckenbauer ayaa dhinaca kale sheegay in Jürgen Klopp uu wax badan ka badalay qorsho ciyaareedka kubada cagta ee dalka Germany.
Hadaba Jamie Carragher ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee Sky Sports wuxuu kaga hadlay fikirkiisa kaga aadan wararka xanta ah ee Klopp lala xiriirinayo kooxda Bayern Munich.
“Kama walwalayo waxa uu yiri Franz Beckenbauer, ee ku aadan rabitaanka ah inuu noqdo Klopp macalinka cusub ee kooxda Bayern Munich”.
“Marka loo fiiriyo xirfada shaqo ee Jürgen Klopp, wuxuu tababartay kaliya seddex kooxood, ee aan ku jirin Bayern Munich, Real Madrid ama koox kasta ee la mid ah”.
“Mar walba wuxuu jecel yahay inuu qeyb ka noqdo, kooxaha kasoo horjeeda ee ah kuwa aan soo sheegay, taasina waxay noqon kartaa sirta ka dambeysa inuu sameeyo sida ugu fiican uu awoodo”.
“Shaki kuma jiro inay jiraan kooxo waa weyn ee ka dhisan Yurub ee doonaya inay la saxiixdaan Jürgen Klopp maalin maalmaha ka mid ah”.
Carragher ayaa hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay inuu ku adkeysto xiriirka dhow ee u dhaxeeya macalinka reer Germany ee Klopp iyo taageerayaasha Liverpool, taasoo caqabad ku ah inuu ku fikiro ka tagista garoonka Anfield.